Home Wararka Mukhtar Roobow: “Lacag kuma badalanayo karaamada 4ta Milyan ee qof ee ku...
Mukhtar Roobow: “Lacag kuma badalanayo karaamada 4ta Milyan ee qof ee ku nool Koonfur Galbeed”
Waxa maalmihii u danbeeysay socotay da’daalo ay waday dowlada Fedaraalka taas oo lagu doonayay in doorashada la filaayo in ay dhawaan ka dhacdo Koonfur Galbeed looga reebo Musharaxa Mukhtaar Roobow.
Roobow ayaa waxa loo soo diray wafuud kala duwan kuwaas oo fartiimo kala duwan ka waday Dowladda Fedaraalka ah. Musharaxa Roobow aya waxa loo balan qaaday in la siiyo lacag gaaraysa hal milyan isla markaana laga dhigo Wasiirka Tamarta iyo Biyaha ee dowladda Fedaraalka. Laakiin Mukhtaar Roobow aya ku gacan seeray codsiga ka yimid Dowladda Fedaraalka. Roobow oo la hadlay beesha Liisaan saaakay aya yiri ““Lacag kuma badalanayo karaamada 4ta Milyan ee qof ee ku nool Koonfur Galbeed” .
Roobow aya yiri waxa kaliya oo aan ku qancaya waa sanduuqa codeeynta wax ka sokeeyana kuma qancayo”. Mid ka mida xildhibaanada Dowlad Goboledka Koonfur Galabeed aya yiri “ Farmaajo waxa uu mooday in Mukhtar Roobow yahay qof leh dhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida. Ninkaas lacag ma rabo mana ka qaadan doono lacag Farmaajo, waxaa taa ka sii daran hadii uu guuleysto ha ka sugin in uu noqdo qof lacag lagu iibsado ama si fudud u hoos yimaado Farmaajo”
Previous articleMusharaxa MW Farmaajo oo caawa isku dayay in uu lacag u qaybiyo Gudiga Doorashada KG iyo qalalaase ka dhashay
Next articleFinance Ministry Under Scope As $42 M Is Unaccounted
[XOG] Puntland oo Galmudug ku wareejisay Baabuurtii dagaalka ee Kheyre laga...
Xildhibanada Baarlamaanka Galmudug oo kulan Deg deg ah loogu yeeray